ဝတ်လာတာ က G-string ကြိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဝတ်လာတာ က G-string ကြိုး
ဝတ်လာတာ က G-string ကြိုး
One day တွင် ကျွန်တော် မောင်ပေ သည် ကွမ်းလေး တမြုံ ့မြုံ ့နှင့် စာဖတ်နေစဉ် ရ တန်း ကျောင်းသူ တူမလေး ရောက်လာသည် ။ လက်ထဲတွင် အမ်ပီ4ပလေယာ လေး နှင့် ။ ကျွန်တော် တို့ဆွေမျိုးများထဲ တွင် အလွန်အင်မတန် စပ်စု သည် ဟု နာမည်ကြီး သူလေး ဖြစ်သည် ။ ကလေး ဘာသာဘာဝ သိချင်စိတ် စူးစမ်းချင် စိတ် ပေပဲ ဟု လက်ခံ ထားသူ မောင်ပေ့ ကို အကပ်များသည် ။ သူကလေး သိလိုသမျှ မေးမြန်းသမျှ စပ်စုသမျှ မောင်ပေ က အမြဲ ဖြေကြားခဲ့သည် ကိုး ။ ယခုလည်း
“ ဦးဦး ”
“ ဟေ.. မီးမီးလေး….ပြောစမ်း…ဘာများ သိချင်ပြန်ပြီလဲ ” ( မီးမီးလေး ဆိုသည် မှာ ကျွန်တော် ၏ တူမလေး ကို ချစ်စနိုးနှင့် ခေါ ်သည့် နာမည် ဖြစ်ပါသည် ၊ နာမည်တူ ခဲ့ သည်များရှိလျှင် ဆောရီးပါ )
“ ဦးဦး… ၊ မီးမီး အခု သီချင်း နားထောင်နေတာလေ ၊ သိလား ။ သီချင်းထဲ မှာ G-string ကြိုး ဆိုတဲ့ စကားလေး ပါလာတယ် ။ နောက်ပြီး ရှိသေးတယ် ။ စကင်နီ ဆိုလား စတော်ကီ ဆိုလား ပဲ ။ အဲဒါတွေ က ဘာတွေ လဲ ဆိုတာ ဦးဦး ပြောပြပေး ”
ကျွန်တော် မောင်ပေ တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ဆိုသလို ခေါင်းနပန်း ကြီးသွားခဲ့သည် ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ ့တုန်းက မှ ဘော်ဒါတစ်ယောက်နဲ ့ထိုအကြောင်းအရာ များ ကို လဘက်ရည်ဆိုင် တွင် ထိုင်ပွားခဲ့သေးသည် ။ ယခု ရတန်း တက်နေသည့် တူမလေး က မေးလာသည့် အခါ သူမ သိနားလည် အောင် ဘယ်လို ပြောပြသင့်သလဲ ဆိုတာ ကို စဉ်းစားရသည် ။ မေးလာသူ က ယောက်ျားလေး ဆိုလျှင် တစ်မျိုး ။
“ ဒီလို မီးလေးရဲ ့…G-string ကြိုးဆိုတာ မိန်းမတွေ ဝတ်တဲ့ အတွင်းခံ တစ်မျိုးပေါ့ကွာ ”
“ ဟင်..ဦးကလဲ မီးတို ့လဲ အတွင်းခံ ဝတ်တာပဲဟာ ။ မီးတို ့ဝတ်တာ ကို ကျ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ လို ့ပဲ ခေါ ်တာကြီးရယ် ၊ သူ က ဘာများ ထူးနေလို ့G3 ကြိုး လို ့ခေါ ်တာလဲဟင် ”
“ အင်း..ဦး ဘယ်လို ပြောရမှာပါလိမ့် ။ ဒီလိုကွာ… မီးလေးရာ ၊ မီးလေး တို ့ကျောင်းမှာ ဆရာမ တွေ ၊ မီးလေး တို ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ၈တန်း ၉တန်း ၁ဝ တန်း ကျောင်းသူ တွေ ရှိတယ် မလား ”
“ ဟုတ် ရှိတယ်လေ..ဘာလဲ သူတို ့က ဝတ်တာလား ”
“ အမလေး…လေး ၊ မဟုတ်သေးဘူးလေ ၊ ဦး စကား မဆုံးသေးဘူး ၊ သူတို ့တွေ က မီးလေး မေးတဲ့ G3 ကြိုး ကို မဝတ်ကြဘူး ”
“ ဟင်.. ဒါဆို ဘယ်သူ တွေ ဝတ် တာလဲ ”
“ ဒီလိုကွာ … မီးလေး ဗမာ ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ် မလား ၊ တစ်ချို ့ဇါတ်ကားတွေ ထဲ မှာ မကောင်းတဲ့ မိန်းမ တို ့၊ ညဉ့်ငှက် တို့၊ ကြေးစား မ တို ့ဆိုတဲ့ စကားအသုံးအနှုံး တွေ ပါတာ ကို မီးလေး ကြားဖူး တွေ ့ဖူးတယ် မလား ”
“ အင်း..တွေ ့ဖူးတယ်လေ ၊ ဟိုကားတစ်ကား ထဲ မှာ ဆိုရင် အဲဒီ ကြေးစားလုပ်တဲ့ မိန်းမ က မင်းသား ကို ဇွတ်ဖက်ထားတာ ၊ အပေါ ်က ဘော်လီအင်းကျီပဲ ပါတာလေ ၊ မီးလေး တောင် မေမေ့ ကို အဲဒါ ဘာလဲ လို ့မေးတော့ ခေါင်းခေါက် ခံ ရသေးတယ် ”
“ အေး….ဟုတ်တယ် ၊ သူတို ့တွေ က ဝတ် တတ်တယ် ။ G-string ကြိုး ဆိုတာ အရှက်လုံတယ် ဆိုရုံလေး မပေါ ့်တပေါ်လေး ဆိုတာ မျိုး ။ အဲဒီလို ပဲ မှတ်ထားလိုက်တော့ ”
“ ဒါဆို ရင် ဟို စကင်နီ ဆိုလား စတော်ကီ ဆိုလား ၊ အဲဒါ ကရော ဘာအဓိပ္ပါယ် လဲ ပြောပြ ”
“ အဲဒါ က ကွာ ။ မှားနေတာ ။ အမှန် က စတော်ကင်း
စတော်ကင်း ဆိုတာ ဝတ်လိုက်ရင် ဒူးလောက်ထိ ဖုံးတဲ့ အသားကပ် ခြေအိတ် တစ်မျိုး ပေါ့ ။ အခုခေတ် မှာ တချို ့မိန်းမ တွေ ဆိုရင် ပေါင်ထိ ရှည်တဲ့ ဖုံးတဲ့ စတော်ကင်း တွေ ကို ဝတ်နေပြီ တဲ့ ။ စတော်ကင်း ကို အတိအကျ မသိပဲ နားစွန်နားဖျား ကြားတာ ကို လိုက်ခေါ ်တော့ စကန်နီ တို ့စတော်ကီ တို့ဖြစ်လာတာပေါ့ ”
“ သူ က ရော ဘယ်သူ တွေ ဝတ်ကြတာလဲ ဦးဦး ၊ ဦးဦး စောန က ပြောတဲ့ သူတွေ ပဲလား ”
“ ဒီ စတော်ကင်း တွေ ကြ တော့ အခုခေတ် မိန်းကလေး တိုင်းလိုလို ဝတ်နေကြတယ် မီးလေး ရဲ ့၊ မီးလေး တို ့ကျောင်းကပွဲ တွေ မှာ ကောင်မလေး တွေ ဝတ်တာ မြင်ဖူးမှာပါ ။ အမှန်က ဒီဟာ ဝတ်တာက အနောက်နိုင်ငံ တွေ က စ ဝတ်ကြတာ ။ ဦးတို ့ဆီ ကို ရောက်လာတာပေါ့ကွယ် ။ အခု ဆို ရင် မီးလေး လဲ တစ်ခါတစ်လေ လမ်းမှာ မြင်ဖူးမှာပါ ။ စတော်ကင်း အမဲကြီး တွေ ဝတ်ထားတဲ့ သူတွေ ကို ”
“ အင်း..စတော်ကင်းလို ့ခေါ ်တယ်ဆိုတာ အခုမှ သိတယ် ။ မီးလေး မြင်ဖူးတယ် ၊ ဟိုတစ်ခါ အမေ နဲ့ဘလေဇွန် ( blazon ) ကို လိုက်သွားတုန်းက ၊ မမ တွေ ဝတ်ထားတာ ”
“ အင်း…စတော်ကင်း ဆိုတဲ့ ခြေအိတ် ကို ဝတ်လိုက်ရင် ခြေထောက်၊ခြေသလုံး တွေ ကို မမြင်ရတော့ဘူးလေ ၊ အသားကပ် ဆိုတော့ က ။ ခြေသလုံး တို ့ခြေထောက် တို ့မှာ ဝဲတို ့ပွေးတို့၊ အနာရွတ် (ခ) အမာရွတ် ဆိုးဆိုးကြီးတွေ ဝတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဝတ်ကြ လိမ့်မယ် လို ့ဦးတော့ ထင်တာပဲ ”
“ ဒါဆို မီးလေး ခြေထောက် က ဘာအမာရွတ် မှ မရှိဘူး ဆိုတော့ မီးလေး ဝတ်စရာ မလိုဘူးပေါ့နော် ဦး ” ဟု ဆိုကာ သူမ ခြေထောက်နှင့် ခြေသလုံး လေး များ ကို ပြလာသဖြင့် ။
“ အေးပေါ့ကွယ် ၊ မီးလေး လို ခြေထောက်လှလှလေး ရှိတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အဲဒါတွေ ဘယ်လို မလဲ …။ မီးလေး ခြေထောက် ကို အနာရွတ် တွေ မဖြစ်စေချင်ရင် လမ်းသွားရင် ဖြေးဖြေးချင်းသွား….ခလုတ် မတိုက်မိအောင် ဂရုစိုက်သွားနော် ။ မလဲစေနဲ ့၊ လဲ ခဲ့ ရင်လည်း ဖြစ်တဲ့ အနာ ကို ချက်ချင်း ဆေးလိမ်း ရမယ် ။ ခြေထောက် ကို ရေချိုးတိုင်း ချေး(ဂျီး) တွန်း ရမယ် ။ ဟုတ်ပြီလား ”
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ… ဦးရဲ ့..။ ဦးပြောတာတွေ ကို မီးလေး သေချာ မှတ်ထားပါ့မယ် ။ နားထောင်ပါ့မယ် လို ့မီးလေး ကတိပေးပါတယ် ”
“ အေးကွာ….. ဦး တူမလေး က လိမ္မာလိုက်တာ ။ ဒါကြောင့် မို ့လည်း ဦး က အရမ်းချစ်နေရတာ ။ ရော ့မုန် ့ဖိုး ယူသွား ၊ J-cup ဝယ်စား ဟုတ်ပြီလား ”
“ ဟုတ်ကဲ့…သွားတော့မယ်နော် ၊ ဦးဦး ။ တာ့တာ ” ဟု ဆိုကာ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြ ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နှင့် ပြန်သွားသော တူမလေး အား ၊ နောက်ထပ် သူလေး မေးလာဦးမည့် ခေတ်ပေါ ်စကား လုံး များ ကို တင်ကြို လေ့လာ ထားရန် ကျွန်တော် လည်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါသည် ။
( ကိုယ်တိုင် စဉ်းစား ရေးသားထားသော own creation ဖြစ်သည် ဟု ဝန်ခံ ပါသည် ။ အကယ်၍ ယခု ကျွန်တော် ရေးသော အကြောင်းအရာ နှင့် ပတ်သက်၍ ၊ ဂေဇက်ထဲ တွင် တင်ထားပြီး ပို ့စ် ရှိသည် ဆိုခဲ့ပါလျှင် ကျွန်တော့် ၏ စာဖတ်အားနည်း မှု ကို သာ ပြစ်တင်ပါရန် )
ဘာပဲပြောပြော ဒီပို့စ်လေးကိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်..။ အရင်ထက် တန်းမြင့်လာတဲ့ သဘောပေါ့..။ အရင်ပို့စ်တွေထက် တစ်တန်းမြင့်လာပြီ ..။ ပြန်ကျမသွားစေလိုပါ..။ ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုထဲ ဇောင်းမပေးပါနဲ့..။ အကြောင်းအရာစုံအောင် လက်တွေ့ ကျကျ လေးရေးရအောင်..။ စာရေးသူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အရာမှာဆို စိတ်ဝင်စားရမယ်..။ တစ်သာထဲ စိမ့်ဝင်နေနိုင်ရမယ်…။ ဒါက နေဝန်းနီရဲ့ ဆရာတွေ ပို့ချခဲ့တာ မှတ်သားထားတာပါ..။
ဘယ်လို ဘယ်လို… စစ်သားတွေကိုင်တဲ့ ဂျီသရီးမောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ကို မိန်းခလေးတွေက အတွင်းခံအဖြစ် ဝတ်တယ်။ ထူးဆန်းလှပေစွ။ အင်းလေ…စစ်တပ်က သေနတ်အသစ် MA version ပြောင်းသုံးနေပြီဆိုတော သေနတ်အဟောင်းတွေကို မှောင်ခိုထုတ်ရောင်းစားကြမှာပေါ့။ သူတို့နဲ့တောင် ရန်မဖြစ်ရဲတော့ဘူး၊ တော်ကြာနေ ဂျီသရီးနဲ့ထုတ်ပစ်နေမှဖြင့်….
G3 ကြိုးလို့ မြန်မာတွေပဲသုံးတာလားတော့မသိ..
ဒါမှမဟုတ်..ကျုပ်ကပဲ.. မိန်းမအျတွင်းခံတွေနဲ့ပါတ်သက်င်္ပြီး သိပ်မသိတာလားမသိ…။
ဂျီ စထရင်းအတွင်းခံကတော့ သိတယ်..။
စတော့ကင် ကတော့.ရှေးးးးက.ယောက်ျားတွေဝတ်တာက စတယ်မှတ်မိတယ်..။
အအေးပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ.. အေးလွန်းတာကြောင့်တကြောင်း.. ကို်ယ့်ရဲ့ခြေထောက်သေးသွယ်သွယ်ကို ..လှချင်ကြွားချင်တာကြောင့်တကြောင်း.. အနာရွတ်တွေဘာညာတွေဖုံးနိုင်ဖို့တကြောင်း..စသဖြင့် အကြောင်းအမျိုမျိုးကြောင့် အမျိုးသမီးတွေဝတ်ကြတယ်ထင်တာပဲ..။
ပြောရရင်..မြန်မာပြည်လို… အပူပိုင်းနိုင်ငံက.. အမျိုးသမီးတွေက..စတော့ကင် ကောက်စွတ်ဝတ်တော့… ရီ(ရယ်)စရာလို့ ထင်တာပဲ…။
ပေါင်..ခြေသလုံးတုတ်တုတ်.. ပေါင်တံတိုတို..အမျိုးသမီးတွေဝတ်ထားတာတွေ့ရင်… စိတ်တောင်လေမိတယ်..။
G3 ကြိုးပြီးရင် G2 ကြိုးရော နောက်ထပ် ရှိသေးလားဗျားးးးးးးး
G3 လား G-string လားရှင့်
ဘယ်လိုခေါ်မှန်း မီးမီးမရှင်းလို ့ပါ..ရှင့်
မီးမီးအထင်တော့ G-string ဟုခေါ်မည်ထင်ပါတယ်.ရှင့်
ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ စပ်စုတယ်ထင်မှာဆိုးလို့လေသံပြောင်းထားတာပါရှင့်
အဲဒါ ရန်ရန်ချန်းတို့ Acid အဖွဲ့က ဆိုထားတဲ့ သီချင်းဖြစ်မှာပါ…. အဲ့သည့်ထဲမှာပါတာကလဲ (ကျွန်တော် နားကြားမမှားဘူးဆိုရင်) G-String ကြိုး လို့ပဲ ဆိုထားတာပါ….
G3 ဆိုတာတော့ မသိဘူး….
အားမပေးကြဘူး ထင်ထားတာ အားပေးကြကြောင်း သိရတဲ့ အတွက် အထူး ဝမ်းသာမိပါတယ် ။ G-string လို ့ပြင်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ